Global Voices teny Malagasy » Mampiasa ny Fanjakana Islamika mba hiresahana mikasika an’i Okraina Atsinanana ny fandrangitana sasany ao amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Desambra 2019 18:42 GMT 1	 · Mpanoratra Maxim Edwards Nandika (fr) i Suzanne Lehn, imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Ady & Fifandirana, Hehy, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Loharano nakana ny sary: Vondrompiaharamonina Vkontakte “Fanjakana Islamika ao Donbass sy Lugant”
Misy andian-dahatsary nivoaka tao amin'ny Vkontakte sy Youtube mampiseho milisin'i Okraina Atsinanana ao Donetsk sy Louhansk, nafangaro tamin'ny sarinà djihadistan'i El ao Siria sy mpiady avy ao Kaokazy Avaratr'i Rosia. Misy feon-kira ilay fangaron-dahatsary ary mifanakalo eo anivon'ireo tsikin'ny takbirs  (fomba fiteny arabo hoe “Lehibe Andriamanitra!”) ny rehetra. Eo amin'ny zoron'ny lahatsary, voamariky ny sainam-pirenen'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Donetsk avokoa ireo lahatsary rehetra izay voarakotra kalachnikov roa mifampisalika sy shahada  (Asa ao anatin'ny finoana Silamo”).
Avy amin'ilay tranga antsoina hoe “Ny Fanjakana Islamikan'ny Donbass sy Lugant” ireny lahatsary hafahafa ireny, fikambanana virtoaly nipoitra tamin'ny volana Jolay tamin'ity taona ity. Raha jerena indray mipi-maso, toa mpomba mahafatra-po an'ireo Okrainiana mampisara-bazana ireo mpampiasa YouTube izay mandray anjara amin'ity famokarana ity. Manambara ny firotsahany amin'ny fanangonam-bola ho an'ireo mpikomy mihitsy aza ny sasany amin'ireo olona ireo. (Matetika dia anti-Kiev be ireo lahatsary hafa avoakan'izy ireo.)
Misy vondrona Vkontakte  natokana ho an'ny famoronana zavakanto sy sarinà saina ho an'ny “Fanjakana Islamika” ao Donbass mihitsy aza. Akaninà fandrangitana ilay vondrompiarahamonina, izay ahitàna votoaty tena adaladala mampihomehy. Afaka ahitàna sary novaina an'ilay kômandan'ny mpikomy teo aloha, Igor Strelkov, ôrtôdoksa votom-bavaka, nametahana volombava be, izay manome toky fa “hanadio ny Masina Donbass amin'ireo mpamadika” izy.
Toa mihevitra ho mahafantatra ireo mpampiasa Aterineto sasany fa asan'ireo mpikatroka pro-Kiev izay miezaka ny handoto ireo mpikomy Okraniana misy fifandraisana amin'ny El ireny lahatsary sy sary ireny. Resy lahatra ny sasany hafa fa mamorona ireny votoaty feno mistery ireny ireo mpitsikombakomba amin'ireo mpikomy mba hanesoana ny fikirizan'i Kiev hiantso azy ireo hoe “mpampihorohoro”:
Mazava ho azy, marina fa nikiakiaka hoe ‘الله أكبر’ (allahu akbar) ireo mpiadin'ny Donbass, sady somary mivazivazy no matotra ihany, satria silamo ny sasany amin'ireo namanay ary miady amin'ny OTAN noho ny antony mitovy amin'ny rehetra.
Tsy mankasitraka ny ezaka fivazivaziana ireo mpanohana rehetra ny mpikomy, toy ny lazain'ny fanehoankevitra  sasany ao amin'ny YouTube:
Aza ampiakarina ao amin'ny Aterineto ireo, mety tena hino sy hamory olona manerana ireo Tsetsenina ao amin'ny Donbass ireo khokhly [teny fanambaniana ny “Okraniana”]
Tamin'ny volana Septambra lasa teo, nitady porofon ‘ny fandraisan'ireo mpiady Tsetsenina anjara tao amin'ny Donbass i Karena Avedissian avy ao amin'ny RuNet Echo, ary nanao tsoakevitra fa ambony ny tombana amin'ny fahamarinan'ireo tsaho.
Manana fanazavana  ho an'ny “Fanjakana Islamikan'ny Donbass sy Lugant” ny mpampiasa aterineto mitoraka bilaogy ao amin'ny tltpravda.ru:
Efa tafiakatra tao amin'ny Aterineto ihany ireo lahatsary ireo tany amin'ny faran'ny fahavaratra tany. Horonantsarin'ny “Fanjakana Islamikan'i Donetsk sy Lugant”. Fisintonana lakolosy faran-tampony sy tsara indrindra tamin'ny fisafoahana tanatin'ireo haino amanjery Okrainiana fa “misy islamista mpampihorohoro miady ao amin'ny Donbass”. Tena tsara loatra ity fandrangitana ity ka na ao Rosia aza dia maro ireo nanapa-kevitra fa fandrangitana an'i Okraina izany, natao hamorona fitaka amin'ny fisian'ireo fizaràna Tsetsena eo anoloan'i Donetsk.
Nanamarika tao amin'ny Twitter ny tsifahamendrehan'ny firotsahan'ireo Tsetsenina ny kaonty iray fanalàna mitondra ny anaran'i Joseph Staline.
Tonga tao amin'ny Donbass mba hiaro ireo Rosiana amin'ireo Okraniana ireo Tsetsenina. Na Andriamanitra aza tsy nahafantatra fa azo tanterahina izany. Tontolo mitapy be ity!
Ohatra tsara amin'ny fomba fanirian'ny hatsikana maizina —indrindra eny anivon'ireo fandrangitana anaty Aterineto—eny amin'ny tahotra, fitsaratsarampoana sy ny fanapariahana vaovao diso ny “Fanjakana Islamikan'ny Donbass sy Lugant”. Hipok'ireo fangaro telo ireo ny ady ao Okraina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/25/145900/
 vondrona Vkontakte: http://vk.com/isodal
 Toa mihevitra ho mahafantatra : http://priceofliberty.tumblr.com/post/92333667238/heres-a-video-i-found-online-the-authenticity
 Resy lahatra : https://www.facebook.com/ilyin.antonovich/posts/641739982588187